नाफा बुक गर्ने सक्रिय हुँदा १.१६ % घट्यो नेप्से, ६ अर्ब २७ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
मंसिर २, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३२ दशमलव ३९ अंक अर्थात १ दशमलव १६ प्रतिशत घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ७६९ दशमलव १३ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २२४ ओटा धितोपत्रको ९८ लाख ६२ हजार ९४० कित्ता धितोपत्र रू. ६ अर्ब २७ करोड १८ लाख ६७ हजार २३० मा कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका ती धितोपत्रमध्ये दुई ओटा धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।यो दिन मानुषी लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४९५ दशमलव ३० र तेह्रथुम पावर कम्पनीको रू. ६४३ दशमलव १० पुगेको छ ।
त्यसैगरी यो दिन सबैभन्दा बढी मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.५४८ मा झरेको हो ।
त्यस्तै यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भने नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको रू. ६० करोड ४४ लाख ५५ हजार बराबरको भएको छ । दोस्रोमा महालक्ष्मी विकास बैंकको रू. ५७ करोड २८ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये अन्य समूहको परिसुचक १ दशमलव २६ प्रतिशत बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसुचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो ।
सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक २ दशमलव ७७ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव १९ प्रतिशत, व्यापार समूहको २ दशमलव १७ प्रतिशत,हाटल एण्ड टुरिजम समूहको १ दशमलव १५ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको २ दशमलव शून्य २ प्रतिशत,वित्त समूहको १ दशमलव ०३ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ६२ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसैगरी लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत,जीवन बीमा समूहको १ दशमलव ४९ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसुचक १ दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको छ ।
बिहीवार नाफा बुक गर्ने कारोबारीहरु सक्रिय हुँदा बजार केहि तल झरेको देखिएको छ । बढेको बजारमा अल्पकालिन लगानीकर्ताले नाफा बुक गरिसकेको र सस्तो मूल्यमा शेयर खरीद गर्ने हाबी हुँदा बजार घटेको एक लगानीकर्ताले बताएका छन् ।